माल्टामा राम्रो तलबमा रोजगारीको अवसर, थप जानकारीको लागी ! – Kavrepati
Home / समाचार / माल्टामा राम्रो तलबमा रोजगारीको अवसर, थप जानकारीको लागी !
admin November 28, 2021	समाचार Leaveacomment 219 Views
Wied Iz-Zurrieq को कोस्ट रेस्टुरेन्टमा, कोस्ट रेस्टुरेन्ट पूर्ण-समय आधारमा उनीहरूको टोलीमा सामेल हुन वेटर/वेट्रेस/किचेन ह्यान्ड/क्लिनर/फूड प्याकर भाडामा लिन खोज्दैछ। आदर्श रूपमा, उम्मेदवार उत्कृष्ट संचार र ग्राहक सेवा कौशल संग बहिर्गमन र भरपर्दो हुनुपर्छ। यो मौसमी काम होइन, यो एक वर्षभरिको स्थिति हो जसमा साँझ र सप्ताहन्तहरू लन्च शिफ्टहरू बाहेक समावेश हुन्छन्।
कठिन आर्थिक अवस्थाका कारण, तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई हाल कुनै पनि श्रम स्वीकृति जारी गरिएको छैन। तसर्थ, आवेदकहरूसँग वैध कार्य भिसा हुनु पर्छ। के आवश्यक छ: खाद्य र पेय उद्योग मा अनुभव, साथै सम्बन्धित योग्यता, प्राथमिकता दिइनेछ। अंग्रेजीको राम्रो कमाण्ड आवश्यक छ, जबकि अन्य भाषाहरूको ज्ञान एक सम्पत्ति हो।
हामी माल्टामा बस्ने आवेदकहरूलाई मात्र विचार गर्नेछौं। स्थितिको विवरण: पाहुनाहरू बस्ने र तिनीहरूलाई अभिवादन गर्ने। हामी दैनिक विशेष प्रस्तुत गर्दछौं र हाम्रो ताजा माछा र अन्य खानाको तयारीको व्याख्या गर्छौं। पेय अर्डर लिइन्छ। मादक पेय पदार्थ र रक्सी को तयारी। मसला र कटलरी को तयारी। खाना र टेबल क्लियरिङ सेवा गर्दै। नगद ह्यान्डलिंग र बिल प्रस्तुतीकरण।
स्टेशन तयारी गर्दै। काँचका भाँडा र कटलरी धोइन्छ र पालिश गरिन्छ। टेबल सेटिङ र सफाई। बार र फ्रिज स्टक राख्दै। आवश्यकता अनुसार, अन्य कार्यहरू गर्नुहोस्। ओभरटाइम काम गर्न सम्भव छ तर समय रेस्टुरेन्टको नियम र नियमहरू द्वारा निर्धारण गरिनेछ।
एक कर्मचारी हप्ताको छ दिन कामको लागि उपलब्ध हुनुपर्दछ र प्रत्येक दिन आठ घण्टा काम गर्नुपर्दछ। एक कर्मचारीलाई दुई वर्षको लागि काममा लगाइनेछ, र यदि तिनीहरू चाहन्छन् भने, तिनीहरूले थप वर्षको लागि आवेदन दिन सक्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले तलको लिंकमा क्लिक गरी अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् ।
तपाईंले कम्पनीबाट व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि तपाईंको जम्मा गरिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडो भाउचर सङ्कलन गर्नुहोस् । यहाँ रहेका देशहरूमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् जहाँ तपाईं काम गर्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी नोट गर्न निश्चित गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दा तपाई सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
कागजातमा सूचीबद्ध रकम भन्दा बढी नदिनुहोस्
तपाईंले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्छ । विदेशमा रोजगारीको लागि, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी, र तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
विदेश जाँदा अन्य विमानस्थलको सट्टा नेपाली विमानस्थलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा ठगीको सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईंसँग यस विज्ञापनको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, ताहाचललाई सम्पर्क गर्नुहोस् । यदि तपाइँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन्
आवेदन गर्नु अघि, सबै LT विवरणहरू जाँच गर्नुहोस्
तपाइँको कोटा कति बाँकी छ भन्ने थाहा पाउँदा तपाइँलाई आवेदन दिने कि नगर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। यो कोटा पूरा भएको सम्भव छ । भर्ती एजेन्सीहरू र विदेशी रोजगारदाताहरूको लेनदेन इतिहास छ कि छैन पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं यसलाई गुगल प्रयोग गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ । एसएमएस पठाउँदा तपाईंलाई कुनै पनि समयमा जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ। 34001 मा पठाउन LT [space] [Lt-Number] टाइप गर्नुहोस्।
Previous यिनै हुन् आज भएको दुर्घटनामा अकालमै ज्यान गुमाएका बाबु छोरा
Next हेर्नुहोस लाइसेन्स परीक्षामा खुल्यो नयाँ रहस्य: ट्रायल फेल भएपनि १२ हजार रुपैयाँ दिए पास !